Maamulka Madaxweyne Trump oo dedejinaya qorshe lagu ciqaabayo Shiinaha |
Maamulka Madaxweyne Trump oo dedejinaya qorshe lagu ciqaabayo Shiinaha
Washington–Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dedejinaya hindise Shiinaha looga wareejinayo wax soo-saarka warshadaha, iyo canshuuro kale oo Beijing loogu ciqaabayo qaabkii ay ula tacaashay cudurka Coronavirus, waxaa sidaas sheegay saraakiil xog ogoal u ah qorshaha Mareykanka.
Mareykanka ayaa sidoo kale doonaya inuu sameeyo isbaheysi ay ku jiraan “saaxiibada lagu kalsoon yahay”, kaasi oo loogu magac daray “Shabakadda Baraaraha Dhaqaale,”, sida uu sheegay sarkaal xog-ogaal ah.
Dowladda Mareykanka ayaa la shaqeyneysa dalalka Australia, India, Japan, New Zealand, Korea-da Koonfureed iyo Vietnam, si horey loogu dhaqaajiyo dhaqaalaha adduunka, sida uu sheegay xogahayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo, 29-kii April.
Si kastaba, ayada oo shirkado badan oo Mareykan ah ay si xooggan u maal-gashteen warshadaha Shiinaha, iskuna haleeyaan dadka gaaraya 1.4 bilyan ee dalkaas ku nool, oo qaata mushahar aad uga hooseeyaa kan dadka Mareykanka, qorshaha Trump ayaan si sahal ah ku dhaqan geli doonin.
Sidoo kale, in warshado cusub laga dhiso Mareykanka aya aqaadan karta shan ilaa sideed sano, taasi oo ah caqabad kale.